July (18) June (9) May (10) April (14) March (8) February (14) January (7) Arrimaha Bulshada Xoolo oon ugu dul dhintay ceelka Diif oo cilladeysan maalintii saddexaad (ERGO) - Ceelka keliya ee deegaanka Diif ee gobolka Jubbada hoose ayaa cilladeysan maalintii saddexaad. Ilaa 39 neef oo ceelka loo keenay si looga waraabiyo ayaa harraad ugu dul dhintay. Ceelkan ...
Gudniinka Fircooniga oo si weyn looga maamuuso tuulooyinka Shabeellaha dhexe (ERGO) - Tuulooyinka ku hareereysan webiga Shabeelle ee u dhow Jowhar weli waxaa si weyn looga qiimeeyaa gudniinka fircooniga oo ah caado ku sii yaraaneysa meelo badan oo Soomaaliya ah. Si gaar a...
Nin ka soo noqday qaxootiga oo fursado shaqo u abuuray dadka xeryaha dhowaan ka soo noqday Magaalada Kismaayo waxa sanadahaan ku noqonayey qaxooti tiro badan, haddaba nin ka mid ah dadkii laba sano ka hor iskiis ugu noqday Kismaayo ayaa ka bilaabay gudaha magaalada hanaan shaqo, isagoo shaq...
Barnaamijka codka dhegeystaha Waa barnaamijkeenii codka dhegeystaha oo dhegeystayaasha idacadda Ergo ay kaga hadlaan arrimaha deeganadooda ka taagan. Cabdullaahi Maxamed Amiin ayaa soo jeedinaya....
18 MAR 2017 Akhri
Laascaanood: Abaarta oo saameysay dadka farsameeya agabka uu reer-miyigu isticmaalo (ERGO) - Faarax Saciid Cali oo ah 50 jir ku shaqeysta farsamada bir-tumista ayay shaqo-la’aan soo wajahday saddexdii bil ee u dambeysay. Xoolo-dhaqatada ka timaada miyiga oo uu u farsameyn ...
16 MAR 2017 Akhri
Doolow: Dad la baro farsamada gacanta Qofku in uu leeyahay xirfadda gacanta ama farsamada waxay kaalin mug leh ku leedahay nolashiisa dhaqaale iyo hormarineed. Magaalada Doolow waxaa ku yaal dugsi dadka lagu baro farsmada gacanta. Halkan ...
Wareysi aanu la yeelanay wiil ay dhashay Hodan oo ah haweenaydi uu jeclaaday Cilmi Boodhari Waxaa la sheegaa in Cilmi Boodhari uu u dhintay jaceyl uu u qaaday Hodan, sheekadan waxay caan ka tahay Soomaalida dhexdeeda. Rashiid Maxamed waa wiil ay dhashay Hodan wuxuu buug ka qoray sheekada hoo...
12 MAR 2017 Akhri
Barnaamijka Codka Dhageystaha Kusoo dhawaada barnaamijka codka dhageystaha oo usbiici ba mar ka baxa idaacada Ergo.Waxaa soo jeedinaya Cabdullahi Maxamed Amiin...
11 MAR 2017 Akhri